Kylian Mbappe oo ka hadlay haddii uu dhammaadka xilli ciyaareedkan ka tagayo kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(Paris) 11 March 2019. Kylian Mbappe ayaa ka hadlay haddii uu dhammaadka xilli ciyaareedkan ka tagayo kooxdiisa Paris Saint-Germain.
Kylian Mbappe waxa uu soo jeediyey inuusan qorsheynaynin inuu ka tago kooxdiisa reer France ee Paris Saint-Germain dhammaadka xilli ciyaareedkan.
20-sano jirkaan Mbappe ayaa ku raaxaysanaya xilli ciyaareed kale oo wanaagsan oo uu ku qaadanayo Paris, waxaana uu shabaqa soo taabtay 29 jeer 33 kulan oo uu tartammada oo dhan u ciyaaray kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska.
PSG ayaa dhawaan laga soo reebay tartanka Koobka Horyaalladda Yurub ee Champions League, waxaana la soo jeediyay in laacibka reer France uu doonayo inuu kooxda ka tago suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Mbappe ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda uu hoggaamiye tababare Thomas Tuchel, waxaana uu xaqiijiyey inuu sii joogi doono sanadka soo socda.
“Hubaashii halkaan ayaan ahaan doonaa sanadka soo socda, taas horay ayaan u ogolaaday, kama caawineyso inay ka welwesho xaaladdayda shakhsi ahaaneed sidaa daraadeed taasi waa mid cad oo sax ah.” ayuu Mbappe u sheegay Telefoot.
Xiddigan xulka qaranka Faransiiska ayaa xilli ciyaareedkii hore ee 2017-18 ku qaatay amaah kooxda PSG isagoo ka soo dhaqaaqay Naadiga Monaco, ka hor inta aysan heshiis joogto ah ka saxiixan kooxda Paris suuqii kala iibsiga xiddigaha ee la soo dhaafay.
Da’yarkan xawaaraha badan ee Mbappe ayaa heshiiskiisa garoonka kooxda PSG ee Parc des Princes waxa uu ku eg yahay illaa ololaha 2021-22-ka.